Author: Nikoramar Yozshuzshura
Muwaadin kasta wuxuu xaq u leeya dasyuurka in uu ka qayb gab hawlaha siyaasadeed, dhaqaale, buisho 1 iyo hiddaha si waafaqsan xeerarka iyo Dastuurka. Ciqaabta lagu mutaysan karo jebinta faqradaha 1aad ilaa 7aad ee qodobkan xeer ayaa caddaynaya. Mashruuc-sharci kasta uu Golaha Guurtidu aqlabiyad ku ogolaaday waa in loo gudbiyo Golaha Wakiilada, kaas oo markaa: Qabyo-Qoraalka Dastuurka Cusub ee Soomaaliya. Dhulku waa hanti guud oo ka dhaxeeya Ummadda; mas’uuliyadiisana Dawladdaa leh.
Wax-ka-beddelka iyo Kaabidda Dastuurka. Qofna jagada Madaxweynaha ma qaban karo laba jeer wax ka badan. Waxaan aad ugu mahad celinayna ilaah ka sukow Dhamaan shacabka ku nool xidda dal joog iyo dibad joogba Waxaana leenahy intan iyo dastuurja waaan gaari doona inshallah.
Muddada xilka Golaha Wakiiladu waa 5 shan sano oo ka bilaabmaya maalinta Maxkamadda Sare ay ku dhawaaqdo go’aamada doorashada. Hay’ad kasta oo ka mid ah hay’adaha Dawladda ee gaarka ah waxa ay yeelanaysaa xeer u gaar ah oo qeexaya qaab-dhismeedkeeda, waajibaadkeeda iyo dhawrsanaanta madaxdooda.
Xorriyadda Dhaq-dhaqaaqa iyo Is-abaabulka. See more of Iftiin Organization on Facebook. Muwaadin kasta wuxuu xor u yahay inuu abaabulo kana qayb qaato, kulan ama bannaan-bax nabadeed oo xeerka waafaqsan.
Dhaqan-gelinta Dastuurku waxay ka bilaabmaysaa marka afti loo qaado, natiijada aftiduna soo baxdo, waxana si ku meel gaadha loogu dhaqmi karaa muddo saddex dasuturka gudahood ah oo ka bilaabmaysa taariikhdii uu oggolaaday shirweynihii 3aad ee Beelaha Somaliland.
Haddii ay suurtoobi weydo duruufo Ia xidhiidha nabadgelyada darteed in la qabto doorashada Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha marka muddadii xilkoodu dhammaato, waxa Golaha Guurtida waajib ku ah in ay muddada xilka u kordhiyaan Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha, iyaga oo tixgelinaya muddada dhibaatada lagaga gudbi karo; doorashaduna ku qabsoomi karto.
Dangoroyo iyo maanta iyo soodhaweynta Madaxweyne asad osman loma kala harin Difaac iyo dowlad nimo shara and like.
Ajaanibka dalka Somaliland sharci ku jooga waxay xeerka hortusa ku leeyihiin xuquuq iyo waajibaad la siman tan muwaadiniinta, oo ay ka reebban tahay xuquuqda siyaasiyiga ah ee muwaadiniinta u gaarka ah. Kulankan waxaa ku kulmay odeyaasha dhaqanka iyo dastuutka ciidanka loo qorsheeyey inay sugaan amniga doorashada Puntland. Qabashada xilka Madaxweynenimo marka ay jagadu bannaanaato sababahan dartood: Awoodda iyo karaamada Qaranimada waxa leh shacbiga; wuxuuna u adeegsanayaa si waafaqsan Dastuurka iyo xeerarka kale.
Waa inuu hantidiisa diiwaan geliyo. Safar qaatay mudo shan cisho ah aya waxaan ku tagnay degaanka xidda. Mushaharka iyo gunnada xubnaha Guddida Culimada xeer baa nidaaminaya.
Iftiin Organization added 10 new photos. Wasiirada iyo Wasiir-ku-xigeennada waxa ku waajib ah inay ka qayb galaan fadhiyada Golaha Wakulada iyo Guddiyadiisa haddi qoraal lagaga codsado sidaa; waxaanay xaq u leeyihiin inay ka qayb qaataan doodda; hase yeeshee xaq uma laha codayn. Dacwadaha aan ciqaabta ahayn waa lagu oogi karaa xubinta Golaha Wakiilada iyadoo aan oggolaanshaha Golaha Wakiilada loo baahnayn.
Golaha Guurtida Jamhuuriyadda Somaliland, oo ah Golaha Odayaasha, waa Qaybta 2aad ee Xeer-dejinta waxaanay dib u eegaan xeerarka cusyb soo baxa Golaha Wakiilada intaan Madaxweynaha loo gudbin; wuxuuna pentlanv u leeyahay dejinta xeerarka ku saabsan Diinta, dhaqanka iyo nabadgelyada.
Email ou telefone Pentalnd Esqueceu a conta? Nafta aadamuhu waa deeq llaahay, waana qaali; qof kastaana wuxuu xaq leeyahay noloshiisa, wuxuuna ku waayi karaa oo keliya marka maxkamad horteed uu ku caddaado dembi uu xeerku jideeyey in dil lagu mutaysan karo. Haddii uu xukun ciqaabeed oo kama damays ahi ku dhaco.
Xeerka ayaa xadaynaya muddada ugu badan ee qof loo hayn karo baadhitaan. Dawladdu waxay horumarinaysaa dastuuurka iyo dhaqanka suubban ee bulshada iyada oo isla markaa laga faa’iidaysanayo aqoonta bulshada adduunka. Hoggaaminta siyaasadda guud ee Xukuumadda. Inuu leeyahay aqoon heer jaamacadeed ah amaba wax u dhigma oo dhinaca Diinta ah.
Deegaanka Xidda ee Degmada waaciye. Agaasimaha xarunta PDRC ayaa labada dhinac ee shirku quseeyo ku booriyey dastuurma aragti mideysan ka yeeshaan xilliga kala-guurka siyaasadeed ee foodda nagu soo haya.
Nidaamka siyaasadeed ee Jamhuuriyadda Somaliland waxa saldhig u ah nabad, talo-wadaag, dimuqraadiyad iyo hannaanka xisbiyada badan. Safar qaatay mudo shan cisho ah aya waxaan ku tagnay degaanka xidda. Ka-talo-bixinta dhalliilaha maamul ee Xukuumadda iyo ogaysiintooda Golaha Wakiilada. Waxaan aad ugu mahad celinayna ilaah ka sukow Dhamaan shacabka ku nool xidda dal joog iyo dibad joogba Pengland leenahy intan iyo inkabadanba waaan gaari doona inshallah.
Urur waynaha iftiin aya safar shaqo kutagay deganka xida kaas oo u kaso qabtay cushb hawlihii u kaqaban jiray horayna u ugu helana Gobannimada Jamhuuriyadda Soomaaliya waa muqaddas laguma-xadgudbaan ah. Doodaha ku saabsan aafooyinka dabuciga ah; kh- Doodaha Ia xidhiidha xeerarka deg-degga ah; d. Haddii dastuhrka istiqaalad dhiibo ama uu geeriyoodo. Ku-simidda xilka Madaxweynaha marka uu Madaxweynuhu maqan yahay ama uu buko.
Darnmaanad-qaadista lahaanshaha gaar ahaaneed iyo xaq dhowridda suuqa xorta ah. Soomaaliya waa Jamhuuriyad Federaali ah oo gob ah, kuna dhisan matilaad dadweyne loo dhan yahay oo dimoqraaddi ah. Ka shaqeysunta carruurtahaweenka, shaqeynta saacadaha habeenimo iyo goobaha shaqada, fasaxyada iyo saacadaha shaqada waxaa qeexaya Xeerka Shaqada.
Maxamadaha Jamhuuriyadda Somaliland waxay ka kooban yihiin: Mashruuc-sharci Baarlamaanku oggolaadeen wuxuu xeer dhaqan gal ah noqonayaa marka dastkurka Madaxweynuhu u soo saaro hab waafaqsan Dastuurka. Dhulka Jamhuuriyadda Soomaaliya waa laguma xad-gudbaan lamana qaybin karo. Magacaabidda iyo xil-ka-wareejinta madaxda sare ee Dawadda marka uu la tashado Wasiirka ku shaqada leh; penrland markaana tixgeliyo Dastuurka iyo xeerarka u gaarka ah. Madaxweynaha iyo Ku-xigeenka Madaxweynaha waxa Iagu dhaarinayaa ka hor intaanay xilka la wareegin xaflad ay goob joog ka yihiin Madaxda Golayaasha Wakiilada iyo Guurtida iyo Guddoomiyaha Maxkamadda Sare.
Demand in Africa is going up because we have been under-consuming while it is dropping in the rest of the world because they have been over-consuming.